Strike Fire 3d survival Commando Fps 2021 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - APKTom
ဒေါင်းလုပ် XAPK（67.7MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Strike Fire 3d survival Commando Fps 2021
စစ်ပွဲများရှိကြယ်ပွင့်ဂိမ်းများ, ငါတို့ရဲ့ရဲရင့်ခြင်းနှင့်တက်ကြွသောအော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤပျော်စရာဂိမ်းတစ်ခု၏စစ်သားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သင်၌သင်၏ရန်သူများအားအခမဲ့ဂိမ်းတွင်စိန်ခေါ်ရန်နှင့်စစ်ပွဲသစ်တွင်ကြီးမားသောစစ်တပ်သေနတ်သမားဖြစ်လာသည် ? ဟုတ်ကဲ့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းသည်သင့်အတွက်သာပြုလုပ်သည်။ အော့ဖ်လိုင်းဂိမ်းများလှုပ်ရှားမှုအသစ်ကိုမျက်မြင်သက်သေများကိုမျက်မြင်သက်သေများကိုသက်သေခံရန်ဤဂိမ်းအသစ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများကိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းအသစ်များတွင်စစ်ရေးအားကစားပြိုင်ပွဲအမျိုးမျိုးကိုလေ့လာပါ။ ရိုက်ကူးသည့်စွန့်စားမှုဂိမ်းများနှင့်ဂန္ထဝင်ဂိမ်း mode ကိုအခမဲ့ဂိမ်းများတွင်တွေ့ရခဲသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးမစ်ရှင်ဂိမ်းအော့ဖ်လိုင်းတွင်အားလုံးရှိသည်။ ဤအော့ဖ်လိုင်းသည်ပျော်စရာဂိမ်းများနှင့်သေနတ်ဂိမ်းများသည်သင့်အားနောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းများအော့ဖ်လိုင်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းများကိုပေးသည်။ သင်၏ရန်သူများကိုအနိုင်ယူပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောဂိမ်းကစားနည်းများတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းမစ်ရှင်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ စစ်ရေးအရနောက်ဆုံးဂိမ်းများကိုရပ်တန့်ခြင်းမပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုက်ကူးရေးဂိမ်းကိုကစားပါ။
Survival Traeling War!
သင်၏စစ်ပွဲတွင်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိပြီး Sniper ရိုင်ဖယ်နှစ်ခုလုံးကို သုံး. မီးသတ်သမားများအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ပါ ထူးခြားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တွားသွားသတ္တဝါများကိုတိုက်ခိုက်ရန်သေနတ်များ။ လျှို့ဝှက်သေနတ်သမားများကိုနေရာချထားပြီးဖယ်ရှားပြီးပျံသန်းသောစက်အမျိုးမျိုး၏အကူအညီဖြင့်သင်၏တက်ကြွသောသေနတ်များကိုပစ်ပါ။ ဖျက်ဆီးခြင်း, ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်စစ်ပွဲတွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်တပ်သေနတ်သမားဖြစ်ရန်သင့်သွားသောအရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။
Fire Betting Squad ဂိမ်း 21 - အော့ဖ်လိုင်းသေနတ်ဂိမ်းတွင်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။ •စစ်လက်နက်များအသံ! အသံဖမ်းလုပ်ငန်းများပါ0င်သည်။
•လက်နက်ကိုင်များရှာဖွေခြင်း - • Survival အတွက်ပံ့ပိုးမှုစင်တာများ, သေနတ်များနှင့်စစ်ပွဲများကိုစုဆောင်းခြင်း, US ကြည်းတပ် command ကိုရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသေနတ်သမားအဖြစ်စူးစမ်းလေ့လာပါ။
Top5Best Battle Royal Games ⚡ PUBG Mobile Alternatives You Can Play Now!
Galaxy S4 Floating Balloons
Hi bro9999. 999.999
TIN Maung wai